Isimo Sokonga Nokusetshenziswa Kwezimali | Martech Zone
I-Anatomy Yokonga Nokusebenzisa Imali
NgoLwesithathu, Septemba 19, 2012 Douglas Karr
Njengabakhangisi, kwesinye isikhathi inkinga yethu enkulu ukudlula isinqumo sokuthenga. Abantu abakuqapheli, kepha kukhona isayensi kulowo mcimbi. Ngenkathi le infographic igxile ekubukweni kwe- isinqumo sokuthenga sabathengi, Abakhangisi kufanele bagxile ekutheni bangasiza kanjani kule nqubo ngokuklama, ukupakisha, ukuthumela imiyalezo nangokuzibandakanya. Ukuqaphela izinqola zokuthenga ezilahliwe kanye nezivakashi ezihlaselwe - bese zihlola ukwehluka okuhlukile - kungasusa izithiyo zokungena.
Umthombo wesithombe: ImaliSupermarket
Ngabe Ukuthengisa Imakethe Kuyisu Elihle?
5 Kumele-Bona Izibonelo Zokushicilela NgeDijithali
Sep 24, 2012 ngo-8: 24 PM
Siyabonga ngalokhu kufakwa okuchazayo okuhlukanisa ukusetshenziswa kwemali nokonga. Into enhle ngalokhu okuthunyelwe ukuthi siqonda umphumela wokugcina wokusebenzisa kakhulu uma kuqhathaniswa nokulondolozwa okungaka.ngokubonga ngalokhu kufaka okuhle.